अर्थमन्त्री पौडेललाई असफल हुने छुट छैन ! AahaKhabar
अर्थमन्त्री पौडेललाई असफल हुने छुट छैन !
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा यतिबेला विश्वको अर्थ ब्यवस्था धरासायी बनेको छ । कोरोनाको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । लामो समयको लकडाउनका कारण उत्पादनमुलक क्षेत्र सुस्ताएका छन् भने धेरै जनाको रोजिरोटी खोसिएको छ । स्वदेशी रोजगारका क्षेत्रहरु तहसनहस हुने गरी प्रंभावित हुँदा हजारौं मानिस बेरोजगारको चपेटामा परेका छन् । यो विषम समयमा सरकारले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई थमाएको छ । सरसर्ती हेर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्र अहिलेसम्मको नराम्रो अवस्थाबाट गुज्रेको अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नेकपाका महासचिवसमेत रहेका पौडेलले योसहित अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी दोस्रोपटक लिएका छन् । पौडेल नेकपाभित्र चतुर नेताका रूपमा परिचित छन । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा बुटवलबाट बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको प्रभाव बढेको पाइन्छ । यसअघि उनले भूकम्प, मधेस आन्दोलन तथा भारतको नाकाबन्दीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र धरासयी भएका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । त्यतिबेला बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएर चर्चामा आएका थिए । पहिलो कार्यकालमा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर चर्चा कमाएका पौडेललाई यो कार्यकालमा पनि असफल हुने छुट पक्कै हुने छैन् । यो समयमा अर्थमन्त्री असफल हुनुको अर्थ देशको अर्थतन्त्र बिकराल अवस्थामा जानु हो । मुलुक गरिबी र आर्थिक संकटको भूमरीमा पर्नु हो ।
अहिले कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्र अभूतपूर्व संकटमा छ । यहीबेला अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निकायहरुले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा खुम्चिने अनुमान गरिरहेका छन । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सबल अर्थतन्त्रको जग बसाएको दाबी गर्दै बिदा भएपछि खतिवडाकै बजेट कार्यान्वयन गर्न आएका पौडेलमाथि मन्त्रीका रुपमा थप दबाव देखिएको छ । उनीमाथि विगतका सरकारमा ल्याएका जस्ता ‘कार्यक्रता पोस्ने कार्यक्रम’ ल्याउने छुट हुने छैन् । मन्त्री लोकप्रिय र अर्थतन्त्र धरासायी हुने कार्यक्रमले चरम मन्दीके अर्थब्वस्था झन धरासायी हुँदै जानेछ । विगतमा आफैँले ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिनेलगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अझै कार्यान्वयनमा नआएको कुरा अर्थमन्त्री पौडेलले भूल्न पाइने छैन् ।
कोरोनाको उचित ब्यवस्थापनसहित देशको अर्थतन्त्रलाई तंग्याउने अबसर र चुनौतीको बीचमा पौडेलले सम्हालेको अर्थमन्त्रालयको कामको मूल्यांकन शुरु भइसकेको छ । अनावश्यक खर्च कटौतीजस्ता निर्णयको जोखिम लिन मन्त्री पौडेलले सक्नुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरु मात्रै कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाए भने पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारमा एउटा छाप छोड्न सक्छन । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतामा बदल्नु पौडेलका लागि फलामको च्यूरा चपाएसरह हुने छ । तर खरो उत्रिएमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि उनमा रहेको छ ।